Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း)
Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကျောက်ကပ်တွင် ဆံချည်မျှင် သွေးကြောများစုနေသော နေရာတွင် ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုနေရာသည် ကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် ပိုနေသော အရည်များ၊ ဓာတ်ဆားများကို သွေးထဲမှတဆင့် ဆီးထဲသို့ စွန့်ထုတ်သောနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုနေရာတွင် ရောဂါဖြစ်ပြီး အလုပ်မလုပ်ခြင်းကို ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်ခြင်းဟု ခေါ်ပါသည်။
ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းတွင် ရုတ်တရက် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းဟူပြီး ၂ မျိုးရှိပါသည်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းသည် ကျောက်ကပ်ကိုနှိုက်က ရောင်ခြင်းကို ပထမအမျိုးအစား အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အခြားသောအကြောင်းများကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဒုတိယအမျိုးအစား အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းသည် ဆိုးရွားပြီး နာတာရှည်ပါက ကျောက်ကပ်ကို ပျက်စီးစေပါသည်။
Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ထိုရောဂါသည် အသက်အရွယ်အရွေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် ထိုဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သော အချက်များကို လျှော့ချခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း
တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း ၏ရောဂါလက္ခဏာများ သည် ဖြစ်နေသော ပုံစံအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါလက္ခဏာများမှ သို့မဟုတ် ဆီးအဖြေများမှတဆင့် ရောဂါ ဖြစ်နေကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။
အစောဆုံးတွေ့ရမည့် ရောဂါ လက္ခဏာများမှာ
ဆီးသွားလျှင် သွေးပါခြင်း၊ ဆီးမဲမဲသွားခြင်း
နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါများသည် မည်သည့်လက္ခဏာမျိုးမဆို ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အများအားဖြင့် ပထမအမျိုးအစားနှင့် လက္ခဏာများ တူညီပါသည်။ သို့သော် လက္ခဏာများမှာ ဖြေးဖြေးချင်း ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆီးစစ်လျှင် ဆီးထဲတွင် သွေးနှင့် ပရိုတင်းများကို တွေ့ရခြင်း
ခြေ လက်များ ဖောရောင်ခြင်း
ဆီးထဲတွင် ပရိုတင်းဓာတ်များခြင်းကြောင့် အမြှုပ်ထခြင်း
မကြာခဏ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ကျောက်ကပ်ရောင်ရာမှ ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်တော့သည်အထိ ဆိုးရွားသွားသောအခါ အောက်ပါလက္ခဏာများကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရေပြား ယားခြင်း၊ အသားခြောက်ခြင်း
ညဘက်တွင် ကြွက်တက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
(ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လည်ချောင်းရောင်စေသော Strep ပိုးကောင် ၊ သွားပြည်တည်ခြင်းများမှ ကျောက်ကပ်ရုတ်တရက် ရောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ထဲရှိ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ထိုပိုးကောင်များကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းကြောင့် ကုသမှုများ မလိုဘဲလည်း ပျောက်သွားနိုင်ပါသည်။ သို့သော်မပျောက်သွားပါက ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် ဆေးကုသမှုများ ခံယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အခြေအနေများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါသည်။
Strep ပိုးကောင်ဝင်ပြီးနောက် ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း
ထိုဖြစ်စဉ်သည် Strep ပိုးကောင်ကြောင့် လည်ချောင်းနာပြီး ၁ ပတ်၊ ၂ ပတ်အကြာတွင် ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တခါတရံတွင် အရေပြားပိုးဝင်ပြီးနောက်တွင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထိုပိုးဝင်ခြင်းများကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ကိုယ်ထဲမှ ထုတ်သော ခုခံအားများသည် ကျောက်ကပ်တွင် စုပုံကာ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်လာရပါသည်။
ကလေးများသည် လူကြီးများထက် ပိုဖြစ်တတ်ပြီး ပိုလည်း မြန်မြန် ပျောက်လွယ်ပါသည်။
ဘက်တီးရီးယားကြောင့် နှလုံး ရောင်ခြင်း
ဘက်တီးရီးယားများသည် သွေးထဲမှတဆင့် နှလုံးသို့ရောက်ရှိကာ နှလုံးအဆို့ရှင်များတွင် ပိုးဝင်စေပါသည်။ နှလုံးအဆို့ရှင်များ နဂိုတည်းက ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊အဆို့ရှင် အတုများ တပ်ထားခြင်းတို့ဖြစ်လျှင် ပိုပြီး ပိုးဝင်လွယ်စေပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းတ်ို့ ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်း မည်သို့ဆက်နွယ်ကြောင်း တိကျစွာ မသိရသေးပါ။
HIV ပိုး၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ၊ စီ ပိုးများကြောင့်လည်း ကျောက်ကပ်ရောင်စေနိုင်ပါသည်။
ယင်းသည် ကိုယ်အနှံ့ အရေပြား၊ အဆစ်များ၊ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး၊ အဆုတ်နှင့် သွေးဆဲလ်များတွင် ဖြစ်သော နာတာရှည်ရောင်ရမ်းမှုရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းသည် နမိုးနီးယား အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့် ဆင်တူသော အဆုတ်နှင့် ကျောက်ကပ်တွင် သွေးထွက်သော ရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။
IgA များသည် ကျောက်ကပ်တွင် စုပုံသောကြောင့် ဆီးသွားလျှင် သွေးပါခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုရောဂါသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ မသိမသာ တဖြေးဖြေးဆိုးလာသော ရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းသည် နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရှိ သွေးပြန်ကြော အသေးများနှင့် အလယ်လတ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ခံအားစနစ် ယိုယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါ
အဆုတ်၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အပေါ်ပိုင်းနှင့် ကျောက်ကပ်ရှိ သွေးပြန်ကြော အသေးများနှင့် အလယ်လတ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျောက်ကပ်တွင် အမာရွတ်ဖြစ်စေသော အခြေအနေများ
သွေးတိုးရောဂါကြောင့် ကျောက်ကပ်ကို ပျက်စီးစေသလို ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ဆောင်မှုများကိုလည်း မူမမှန်ဖြစ်စေပါသည်။
တဖန် ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကြောင့်လည်း ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်စေပြီး ဆားဓာတ်များကိုလည်း ကမောက်ကမ ဖြစ်စေပါသည်။
ဆီးချိုသမားများသည် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုဖြစ်ပြီး နှစ်အတော်ကြာတွင် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များနှင့် သွေးပေါင်ကို ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ် ပျက်စီးမှုနှုန်းကို နှေးစေပါသည်။
ကျောက်ကပ် အပိုင်းများ ရောင်ခြင်း
ထိုဖြစ်စဉ်သည် ကျောက်ကပ်တစ်ခုလုံး မရောင်ဘဲ ကျောက်ကပ်ရှိ အစိတ်အပိုင်းလေးများရောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းကို တိကျစွာ မသိရသေးပါ။
Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း ကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေသော အကြောင်းများစွာမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
သွေးကြောနှင့် ဆိုင်သော ရောဂါများဖြစ်ခြင်း၊ သွေးကြောများ သို့မဟုတ် သွေးပြန်ကြောများ ရောင်ရမ်းခြင်း
Good pasture ရောဂါစုဖြစ်ခြင်း
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ (ဥပမာ– NSAID )အလွန်အကျွံ သုံးခြင်း
ကိုယ်ခန္ဓာ အနှံ့ သွေးခြေဥခြင်း
Ig A ကျောက်ကပ်ရောဂါ
အမြှေးတစ်ခုလုံး ပြန့်နှံ့သော ကျောက်ကပ်ရောဂါ
Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်အနေဖြင့် ထိုလက္ခဏာများမှ သို့မဟုတ် ဆီးအဖြေများမှတဆင့် ရောဂါ ဖြစ်နေကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါဆေးစစ်မှုများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ဆောင်ပုံများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
ဆီးထဲတွင် သွေးနီဥများ ပါဝင်နေခြင်းသည် ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆီးထဲတွင် အသားဓာတ်များနေခြင်း၊ သွေးဖြူဥများနေခြင်းသည် ကျောက်ကပ်ပိုးဝင်ခြင်းကို ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆီးအဆိပ်များ(Urea, Creatinine) တက်နေခြင်းဖြင့်လည်း သိနိုင်ပါသည်။
သွေးထဲတွင် ဆီးအဆိပ်များ(Urea, Creatinine) တက်နေခြင်းဖြင့်လည်း ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်နေကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။
ရောဂါကို တိကျစွာ သိနိုင်ရန် ကျောက်ကပ်၏ ပုံရ်ိပ်များကို ဓာတ်မှန်၊ ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်၊ အသံလှိုင်း ဓာတ်မှန်များဖြင့် ဆရာဝန်က ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။
ကျောက်ကပ် အသားစကို အပ်ချောင်းဖြင့် ယူပြီး ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကို သိနိုင်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ကြောင်း သေချာစေရန် အသားစယူခြင်းသည် အတိကျဆုံးဖြစ်ပါသည်။
Acute Glomerulonephritis (ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆေးကုသမှုများသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် မူတည်ပြီး ရလဒ်များ ကွဲပြားပါသည်။
ရောဂါ လက္ခဏာများ ဆိုးရွားမှု အဆင့်
အချို့သော ကျောက်ကပ် ရုတ်တရက်ရောင်ခြင်းများသည် Strep ပိုးကောင်ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပြီး ယင်းသည် ကုသရန်မလိုဘဲ အလိုလို ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
ဆေးကုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများမှ ကာကွယ်လိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းထားခြင်းဖြင့်လည်း ကျောက်ကပ်ကို ကျန်းမာစေခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်ကျဆေးများဖြစ်သော ဆီးဆေးများ၊ ACE Inhibitors၊ Angiotensin II receptor blockers ဆေးများကို ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလ်ိမ့်မည်။
ထို့ပြင် ကျောက်ကပ်ရောင်စေသော အခြားအကြောင်းများရှိလျှင် သွေးတိုးကျဆေးများအပြင် ထိုရောဂါအတွက်ဆေးများကိုလည်း ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။
Strep ပိုးကောင် သို့မဟုတ် အခြားသော ဘက်တီးရီးယားများကြောင့် ဖြစ်သော ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းများတွင် ပိုးသတ်ဆေးများပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါဝေဒနာများကို သက်သာစေပါသည်။
လူးပပ်စ်ကျောက်ကပ်ရောဂါမျိုးတွင် စတီးရွိုက် အရောင်ကျဆေးများ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ဖိနှိပ်ပေးသော ဆေးများကို ပေးရပါသည်။
IgA ကျောက်ကပ်ရောဂါတွင်လည်း ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ဖိနှိပ်ပေးသော ဆေးများနှင့် ငါးကြီးဆီများကို ပေးရပါသည်။သုတေသီများက ငါးကြီးဆီသည် IgA ကျောက်ကပ်ရောဂါတွင် ပေးသင့် မပေးသင့်ကို လေ့လာဆဲဖြစ်ပါသည်။
Goodpasture ရောဂါစု ကိုခံစားနေရသူများတွင် သွေးတွင်း ကိုယ်ခံအားဓာတ်များကို ဆေးထုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပြီး အခြားသူ၏ သွေးရည်ကြည် သို့မဟုတ် အခြားသော အရည်များကို သွေးကြောထဲသို့ ပြန်သွင်းရပါသည်။
ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်သူများအတွက် အခြား ကုထုံးများ ဖြစ်ပါသည်။
ရုတ်တရက် ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း၊ ကျောကပ် အလုပ်မလုပ်ခြင်း ဖြစ်သူများတွင် ကိုယ်ထဲမှ အရည်ပိုများကို ထွက်အောင် လုပ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် ထိန်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးရပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် လူနာများတွင် ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း၊ ကျောက်ကပ် အစားထိုးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးရပါသည်။ ကျောက်ကပ် အစားထိုးခြင်း ပြုလုပ်ရန် အခြေအနေမပေးသော သူများတွင် ကျောက်ကပ်မှန်ှမှန်ဆေးခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောင် သူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
အောက်ပါနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများသည် သင့်အတွက်အကူအညီဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ထဲတွင် အရည်များပိုစုနေခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်းများကို ကာကွယ်ရန် အငန်လျှော့စားပါ။
သွေးထဲတွင် အဆိပ်အတောက်များ မပိုလျှံစေရန် အသားဓာတ်များနှင့် ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်များကို ဖြတ်ပါ။
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော ကိုယ်အလေးချိန် မျိုးကို ထိန်းပါ။
ဆီးချိုရောဂါ ရှိပါက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းပါ။
Glomerulonephritis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glomerulonephritis/basics/definition/con-20024691. Accessed October 19, 2016.
GLOMERULONEPHRITIS. https://www.kidney.org/atoz/content/glomerul. Accessed October 19, 2016.